२०७८ असार १०, बिहीबार १०:०० मा प्रकाशित
हजुर बा ले त्यसै भनेका रहेनछन् बाँच्नुपर्छ के के देख्न पाइन्छ भनेर । आज हजुर बा ले भनेको कुराले यो हरिलठ्ठकको पनि मन छोएको छ । घैटोमा घाम लागेको छ । देखियो हजुर देखियो । जे जे देखिन्छ त्यही त्यही लेखिन्छ । लेखेको कुराले कतिलाई चित्त बुझ्छ होला कतिलाई पित्त दुख्छ होला । त्यो दुख्ने र दुखाउने काम भने मेरो होइन । तर देखेका र सुनेका कुरालाई भनिदिने काम भने गरेको छु । पाइन्छ हजुर पाइन्छ बोल्न पाइन्छ । यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा झोकतन्त्र मिसाउन पाइन्छ । रिस उठेमा ठोकतन्त्र पनि मिसाउन पाइन्छ । आकाशबाट दर्केर झरी परेकोले मात्र हो नत्र कोकतन्त्र पनि मिसाउन पाइन्थ्यो । लु खतम ।
लोकतन्त्रको अनुशरण गर्नेहरुले गणतन्त्रको शासनमा रमाउनेहरुले जनतन्त्रको शासन कहिल्यै बनाउन जानेनन् । त्यो जानेको भए आज जनताले दुःख पाउने थिएनन् । हुन त जनताले दुःख पाएर के भो नेताहरुले पोख खोलाखोल गरेकै छन् । यो गणतन्त्रको सवल पक्ष भनेको अर्कालाई भन्नु रहेछ । आफूतिर हेर्नु रहेनछ । हिजो बैंकले ठीक छैनन् भनेका मान्छेले कर्णाली प्रदेशमा एउटा गजबको कुरा बोले । आफूतिर हेरेको भए त्यसो भन्न सकथे सक्थेनन् तर अरुलाई मात्र हेरेपछि बोले हजुर बोले । कुनै बेलाको छदाखाँदाको मन्त्री पद गएको रिसपनि पोखे । जनयुद्धका नाममा औला गुमाएको गोली खाएको कुरा खोले । यसले कसको मान भयो र कसको अपमान भयो भन्ने कुराको आँकलन पनि गरेनन् । हिजो जनयुद्ध नगरेको भए आज महासयहरु राजाकै शासन खेपेर ज्यूहजुरी गरिरहेका हुन्थे होलान् । लु खतम ।
आफ्नो कोडी सुपाले तोडी भने झैँ । हिजोका दिनसम्म भगौडा भएकाहरु अदालतको फैसलापछि सगौडा भए । हिजो अपराधी करार भएको भन्दै रोष्टमबाट चिच्याउँदै गर्दा आज उनीहरु आफ्नै लाइनमा आएर बसिदिनु पर्ने भयो । उनीहरुले हामी एक हौ एक छौ भनिदिनु पर्ने भयो । अनि फेरी मुख्यमन्त्री हुने सपना पलायो । यो शाही खलक निकै मापाको रहेछ । एक पल्ट होइन तीन तीन पल्ट गलायो । आफ्नै बारीमा मुख्यमन्त्री फलायो । हाम्रो बारीको बिउ चोरेर लगेर भएपनि उता मन्त्री नामको पद फलायो । हामीलाई मात्र हो र हाम्रा समर्थकहरुलाई समेत भित्र भित्र जलायो । २ सय ४० वर्षे शाहीलाई फाल्न यति गारो भएको थिएन यो ५ वर्षे शाही त झन खतरनाक पो देखियो । लडाकु भनेका लडाकु नै हुँदारहेछन् । कानून बमोजिम लडियो सकिएन । प्रमुख ज्यूलाई भनेर भिड्ने योजना बनाइयो सकिएन । हुन त विभिषणका कारण रावणले पनि हार खानु परेको थियो भन्ने जानिएकै छ । के गर्नु आफ्नो व्यहोरा रावणसँगै मिल्ने भएपछि रामसँग कहाँबाट सक्नु । हराम भएर बस्नु पर्ने अवस्था आयो । लु खतम ।
अब कुरो वर्षाको । कुनै बेलामा हिरोनी वर्षाले तहल्का मच्चाएकी थिइन् । आजभोली आकाशे वर्षाले तहल्का मच्चाएकी छन् । आफ्नो पालामा …न्धी पनि नाच्दछे रे क्या । आजभोली आकाशे वर्षाको पालो आएको छ । हिरोनी वर्षा कुन कुनामा छन् पत्तो छैन । त्यसो भएको हुनाले आकाशे वर्षाकै कुरा गर्नु उचित लाग्यो । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले प िलखेट्छ रे । यति बेला देशका बा का दिन ओरालो लागिरहेका छन् । त्यही भएर सबैले लखेटिरहेका छन् । भएन भनेर उनी प्रधानमन्त्री भएका कारण आकाशे वर्षा धेरै भएको भनेर दोष लगाउन थालिसके । कठै ! के सरकारले पानी पारेको हो र ? दोष दिनु छ भनेर होसै गुमाउनु पनि त भएन । खोलाका किनारमा घर बनाउने अनि दोष चाही बा को सरकारलाई दिने । अलिकति मानवताको पनि ख्याल गरौ । इज्जतको पनि ख्याल गरौ । आज आफैले अप्ठ्यारो ठाउँमा खाल्डो नखनौ हजुर भोली त्यही खाल्डोमा आफै जाकिनु पर्ने दिन आउँला फेरि भनेको सुनेर यो हरिलठ्ठकलाई फेरि एक पटक घ्वाच्च घोच्यो ऐया ऽऽऽऽऽऽऽ